ရှုံးနိမ့်မှုတွေကြုံနေရတဲ့ စစ်ကောင်စီဟာ လူထုအပေါ်ဖိနှိပ်အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပိုလုပ်လာရဟု အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား – PVTV Myanmar
ဒီဇင်ဘာ ၈ ၊ ၂၀၂၁
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာ ရှုံးနိမ့်မှုတွေကြောင့် အမျိုးမျိုးဖိနှိပ် ရက်စက်အကြမ်းဖက်တဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ ပိုမိုတွေ့လာရကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းက ပြောကြားပါတယ်။
ယနေ့ ပြုလုပ်တဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကြားကာလဒေသန္တရ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှု ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးမှာ လတ်တလော စစ်ကောင်စီရဲ့ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေအပေါ် မီးမောင်းထိုး ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကို နောက်မှ ကားဖြင့်ဝင်တိုက်တာ၊ အပြစ်မဲ့ရွာသားတွေကို မီးရှို့သတ်ဖြတ် တာတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေဟာ ရင်နာစရာဖြစ်ပြီး အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ အပြုအမူတွေဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောပါတယ်။
သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ကုလသမဂ္ဂမှာ နေရာဆက်လက်ရှိနေတာဟာ အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ အရှိုက်ကို ထိုးနိုင်သကဲ့သို့ NUG အစိုးရအဖွဲ့အတွက် လည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာ အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်က ပြောပါတယ်။
အစည်းအဝေးကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေ၊ ဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေ၊ အတွင်းဝန်တွေနဲ့ ကော်မတီဝင်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ကာ မြေပြင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းထားမှုအခြေအနေ၊ နယ်မြေဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ တော်လှန်လူငယ်တွေက အကြမ်းဖစ်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်
ပြင်ဦးလွင်မှာ တော်လှန်လူငယ်တွေက လုံခြုံရေးတင်းကြပ်တဲ့ကြားထဲက ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်
ပုလောမြို့နယ်မှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ဒေသခံလူငယ်တွေပေါင်းပြီး စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသပိတ်ပြုလုပ်
Minmin Zaw says:
2021-12-08 at 9:26 PM
အာဂျင်တီးနား နိုင်ငံတွင် အကြမ်းဖက် စစ်‌ကောင်စီအား တရားစွဲဆိုထားမှုကို မြန်မာပြည်သူလူထုနှင့်လက်တွဲပြီး တွန်းလှန်ကာကွယ်သွားမည်ဟု ဦးသန်းဌေး ဦးဆောင်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ၂၃ပါတီက ကြေ ငြာချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို မြန်မာပြည်သူ တစ်ယောက် အနေဖြင့် ကန့်ကွက်ပါသည်။ ၎င်းထုတ်ပြန်ချက်သည် မြန်မာပြည်သူလူထု၏ သဘောထားနှင့် လုံးဝ(လုံးဝ) ကိုက်ညီခြင်း မရှိပါ။(ဦးသန်းဌေးပြောသည့် မြန်မာပြည်သူ လူထုထဲ ကျွန်ုပ်မပါဝင်ပါ)
In Argentina, the Burmese Terrorist Council has been sued. In this regard, AsaBurmese citizen, I object to the statement issued by 23 political parties led by Than Htay. This statement does not (at all) coincide with the views of the Burmese people.
Aung MyoMin says:
ဘိုး တော် ဇင် says:
2021-12-08 at 9:31 PM
2021-12-08 at 9:33 PM
2021-12-08 at 9:45 PM
Yan Yan Po says:
2021-12-08 at 9:52 PM
BM Nwe OO says:
2021-12-08 at 9:59 PM
တခါတလေ ပွဲက ကြမ်းလာတဲ့အခါ ကဗျာလွတ်တွေ ကရတယ်။ ကကွက်ကို မနိုင်တော့ ရမ်းလုပ်ရတယ်။ ပွဲကို ထိန်းချုပ်သူက ကိုယ်မဟုတ်တော့ပဲ တဘက်ကလူဖြစ်သွားတဲ့အခါ ရှက်ရမ်းရမ်းတော့တာပေါ့။
မအလ ခု ရှက်ရမ်းရမ်းနေပြီ။
မအလ ဇာတ်မနိုင်တော့ဘူး။ ပွဲ ကြည့်ပရိတ်သက်က ခဲနဲ့ပေါက်တာခံရပြီ။ စင်ပေါ်က ဆင်းရတော့မယ်။
ဇာတ်ခေါင်းကွဲရင် လူရွင်တော်တွေ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်တော့မယ်။ ဇာတ်ညွန်းဆရာ ဘာတွေ ကြံဦးမလဲ။
စာဖတ်နေသူကြီး မျက်ခုံးလှုပ်နေသလိုပါပဲ။ သူ့သမတ်က PR တွေလုပ်နေတာမြင်ရနေပြီ။
Khin May Kyaw says:
2021-12-08 at 10:29 PM
ဟုတ်ပါတယ် သူတို့ရဲ့ အကွက်ကပြည်သူတွေကို နိုင့်ထက်စီးနင်းလုပ်ပီး pdf တွေ မထွက်ထွက်အောင်လုပ်နေတာ…pdf တေကိုမနိုင်တော့ ကုလားမနိုင်ရခိုင်မဲဆိုသလိုပဲ….
2021-12-08 at 10:33 PM
အျမန္ျပန္တိုက္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားေပးၾကပါ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြလူငယ္ေတြအထိနာေနပါတယ္ လက္နက္ကိုင္မ်ားေက်းဇူးတင္ပါတယ္
Ahchar KP says:
2021-12-08 at 11:05 PM
ျမန္ျမန္ ေလးႏိုင္မွျဖစ္မယ္ အေမစုကိုျမန္ျမန္သာကယ္ေပးၾကပါ အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္
Bo Door says:
2021-12-08 at 11:19 PM
2021-12-08 at 11:58 PM
2021-12-09 at 6:45 AM
2021-12-09 at 7:03 AM
2021-12-09 at 9:42 AM
2021-12-09 at 10:44 AM
ဒီမနက် datal charges ဈေးတွေတော်တော်မှစိမ့်ရဲ့လား😪
အင်တာနက် Data ၁၀၀၀ဖိုး5GB ၊
On net ဖုန်း အဝပြောတစ်လ ၁၀၀၀ ၊
ကြိုက်တဲ့ စလောင်းတပ် အတားအဆီးမရှိfree ၊
ကြက်ဥတစ်လုံး ၁၀၀ ၊
ဒီကိုဂျင်တစ်ကဒ် ၄၀၀ ၊
Maskတစ်ဗူး ၁၀၀၀ ၊
အောက်စီဂျင်ဗူး နှစ်သိန်း (ဝယ်စရာတောင်မလို)
အောက်စီဂျင် အခမဲ့ ၊
ဒေါ်လာစျေး ၁၃၅၀ ၊
ဓာတ်ဆီတစ်လီတာ ၃၀၀ ၊ ဆီတစ်ထောင်ဖိုးထည့်ပြီး
ဆေးရုံတက် အခမဲ့ ၊
ကာကွယ်ဆေး အခမဲ့ ၊
ပညာသင်စရိတ် အခမဲ့ ၊
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေး အခမဲ့ ၊
မြွေဆိပ်ဖြေဆေး အခမဲ့ ၊
အသက်မွေးပညာအတက်သင်ကျောင်း အခမဲ့+ လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေး ၊
မူးယစ်ဆေးဝါးအတွက်သတင်းပေးရင် ဂုဏ်ပြုငွေနဲ့ အခွန် free ၊
အရစ်ကျသွင်း ဝန်ထမ်းချေးငွေ ရှယ်..
ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ် ရှယ်package ( အာဆီယံမှာ အမြင့်ဆုံး)
PUBG ပစ်ရင်းစီးလို့ရတဲ့ လေအိတ်ရထားရှယ်..
Wave Moneyတစ်သိန်းလွှဲ ၁၅၀၀ ၊
Wave Moneyထုတ် free..
ဘဏ်အပ်ငွေ စိတ်ကြိုက်သွင်း စိတ်ကြိုက်ထုတ် Percentageမရှိ..
ဆန္ဒပြ (ဘယ်သူမှလာမနှောင့်ယှက်အောင်ရဲအစောင့်အရှောက်နဲ့) free ၊
ဝါသနာကြီးရင် ကြိုက်ရာတက်ပြော free.. (အခြောက်တိုက် အခြေအမြစ်မရှိ ဆဲဆိုရမ်းကားတာကလွဲလို့)
ဆဲဆိုရမ်းကားဦးမလား ၆၆ ဃက ၆လပဲရှိ..
တစ်ပါတ်ကို အသား၄ရက်နဲ့ ထောင်ထမင်း ထောင်ဟင်းကလည်း အပျံစား..
ညစျေးတန်းကိုအေးအေးဆေးဆေးလျှောက်လည်ပြီး ကြိုက်ရာသူငယ်ချင်း အမျိုးအိမ်ဝင်အိပ်
ဧည့်စာရင်း free. .
ငွေညှစ် လူညှစ်ရင် အချိန်မရွေးတိုင်လို့ရတဲ့ သမ္မတရုံး + အတိုင်ပင်ခံရုံးဖုံးက ၁၂လုံး..
ဒါမှမကျေနပ်သေးရင် မကျေနပ်တာကိုရင်ဖွင့်ပြီး အဝဆဲလို့ရတဲ့ သမ္မတရုံးpageကတစ်ခု..
မကျေနပ်တာတွေ အခက်အခဲတွေကိုတိုင်ကြားလို့ရတဲ့ သမ္မတရုံးဖုံးက ၆လုံး ၊
အတိုင်ပင်ခံရုံးဖုံးက ၆လုံး ၊
ရဲ ဌာနဆိုင်ရာကငွေညှစ်ရင် တိုင်ဖို့
အဂတိကော်မရှင်ဖုံးက ၆လုံး ၊
အခုတော့ ဘေးအိမ်ကအရက်သမားနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီး ရဲကငွေညှစ်တာခံရ လမ်းသွားရင်းဆိုင်ကယ်အလုခံရရင်တောင် ဘယ်သူ့ကိုအဖေခေါ်အားကိုးရမှန်းသိဖို့နေနေသာသာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန Page အောက်မှာတောင် ကောမန့် မန့်ခွင့် မရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားဂေါင်းကြီးတို့..
ချိုရဲ့လား လူဆိုရင်တော့ လူလိုတွေးကြသိကြမှာပါ
2021-12-09 at 11:08 AM
2021-12-09 at 11:15 AM
2021-12-09 at 4:46 PM
Thant Hein Tun says:
2021-12-09 at 6:54 PM
မြန်မာစကားအသုံးအနှုန်းက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ “အကြမ်းဖက်မှူ ပိုသုံးလာရ” လို့ သုံးခြင်းဟာ “အခြေအနေအရ မလွှဲမရှောင်သာလို့ လုပ်ရတဲ့သဘောကို ညွှန်းဆိုပြီး အဲ့ဒီလိုလုပ်တာကို သဘောတူနေတဲ့ သဘော” သက်ရောက်သွားစေတဲ့အတွက် မသုံးသင့်ပါ။ “အကြမ်းဖက်မှူတွေ ပိုတိုးလုပ်ဆောင်နေတယ်” ဆိုရင် ဆိုလိုချင်တဲ့သဘော ပိုသက်ရောက်စေပါတယ်။ ရာထူးကြီးယူထားတဲ့အခါ စကားအသုံးအနှုန်းကို ဂရုပြုဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
Daw Cho Cho Oo says:
2021-12-10 at 8:50 AM